UHildah Magaia ungena ebholeni lomhlaba | Scrolla Izindaba
UHildah Magaia ungena ebholeni lomhlaba
Isihlabani seBanyana Banyana, uHildah Magaia usayine inkontileka yakhe yobungcweti neMoron BK yase-Sweden ngoLwesithathu futhi uyilungele inselelo entsha.
UMagaia ubeyingxenye yeqembu leBanyana Banyana elithathe i-Cosafa Cup 2020 futhi waqokwa njengomdlali ovelele ku-Cosafa Women Championship.
Lo mdlali ube nesizini emnandi ne-Tshwane University of Technology ku-SAFA National Women League ngokushaya amagoli angama-36 waqeda isizini ngamagoli alinganayo noRhoda Mulaudzi emashadini okushaya amagoli.
Lo mdlali uphinde wasiza i-TUT ukuthi iqede njengabagijimi be-SAFA National Women League ngemuva kwi-Champions Mamelodi Sundowns Ladies.
Umdlali ozalelwe e-Denilton utshele abakwa-Scrolla.Africa ukuthi ujabule kakhulu futhi ululungele uhambo lwakhe olusha.
“Sekuyisikhathi manje. Nginethemba lokuba nesikhathi esihle kakhulu empilweni yami e-Sweden futhi ngikwazi ukusebenzisa ithalente uNkulunkulu anginike lona ngendlela enhle. Ngifuna ukwenza umndeni wami nesizwe siziqhenye ngami,” uyasho.
UMagaia ujoyina uhlu olukhulayo lwabadlali beBanyana Banyana abaphakamisela phezulu ifulegi laseNingizimu Afrika ebholeni lomhlaba.
Abadlali beBanyana Banyana manje abadlala phesheya kwezilwandle yilaba abalandelayo:
UThembi Kgathlana, e-Spain
UNoko Matlou, e-Spain
UJermaine Seopasenwe, e-Portugal
URefiloe Jane, e-Italy
U-Ode Fuluditulu, e-Finland
UJanine Van Wyk, e-Scotland
UBambanani Mbane, e-Belarus
ULebogang Ramalepe, e-Belarus
UKelso Peskin, e-France
U-Amanda Mthandi, e-Spain
UNothando Vilakazi, e-Spain
URhoda Mulaudzi, e-Belarus
U-Andisiwe Ngcoyi, e-Kosovo
UZanele Nhlapo, e-Kosovo, Albania
ULinda Motlhali, e-Sweden
URegina Mogolola, e-Serbia
URachel Sebati, e-Turkey
U-Amogelang Motau, e-USA
ULetago Modiba, e-Turkey
UKholoso Biyana, e-Spain
ULeandra Smeda, e-Sweden
Umthombo wesithombe: @BanyanaBanyana